ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 - စာမျက်နှာ3- NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » 2014 » ဖေဖေါ်ဝါရီလ (စာမျက်နှာ 3)
လစဉ်မော်ကွန်း: ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2014
New Appointees Bring Depth of Experience and Knowledge to SMPTE‘s ‘Three Pillars’: Standards, Membership, and Education (White Plains, New York–February 27, 2014) The Society of Motion Picture and Television Engineers® (SMPTE®), the worldwide leader in motion-imaging standards and education for the communications, media, entertainment, and technology industries, today announced the 2014 SMPTE directors. Alan Lambshead, SMPTE standards vice president, appointed ...
8 NAB ပြရန်မှာ Ikegami 97K နည်းပညာပြကွက် Host ရန်, Show ကို HDK-2014ARRI, HD ကို Unicam လိုင်း, Ultra High-sensitive ကင်မရာများကို, OLED မော်နီတာ & ပို
Super Hi Vision Format Demonstration; Pioneering Broadcast + Digital Cinema Camera System; Unicam Versatility; HDK-5500 and HDL-4500; 25″ & + 17″ OLED Monitors Will Be Featured (Las Vegas, Nevada–February 27, 2014) NAB, Booth #C7725/ Ikegami,aleader in HD cameras and production equipment for TV broadcasters, networks, and other HD content creators, will demonstrate innovative systems and technologies at the ...
နယူး Adobe ကစာရင်းစစ်ကီးဘုတ် - သာLogickeyboardâကနေ "¢
အော်ဒီယိုနှင့်ဗီဒီယိုစက်မှုလက်မှုကျွမ်းကျင်သူများနှိုငျးမဲ့ Start ကို-To-Finish ကိုထုတ်လုပ်မှု Desire တဲ့အခါ, သူတို့က Adobe ကစာရင်းစစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်း-Edge Tools များနှင့်အင်္ဂါရပ်များမှပါ။ (Las Vegas မှာ, နီဗားဒါး-ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2014) အခုတော့ LogicKeyboard ဂုဏ်ယူစွာယင်း၏ Adobe ကစာရင်းစစ်ကီးဘုတ်များလွှတ်ပေးရန်, အထူးဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက် Adobe စာရင်းစစ်အပေါ်အားကိုးသူကိုအသုံးပြုသူများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းကြေငြာလိုက်သည်။
2014 NAB Show မှာစတူဒီယို Technologies က Introduces တိုက်ရိုက်-Link ကို Mini ကိုအဝေးမှကင်မရာမျက်နှာပြင်စနစ်
Lightweight Camera-Side and Two 1RU Truck-Side Units Maximize Application Compatibility (Las Vegas, Nevada–February 27, 2014) Studio Technologies, Inc., the manufacturer of tailored high-performance audio, video and fiber-optic products for the professional audio, installation and broadcast markets, is introducing the Live-Link Mini Remote Camera Interface System at the 2014 NAB Show (Booth C11149). Live-Link Mini isahighly-integrated and powerful camera ...
အဆိုပါအရှေ့တောင် & အနောက်တောင်ပိုင်းအသံလွှင့် & ဒစ်ဂျစ်တယ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စျေးကွက်မှာတော့ကိုယ်စားပြုမှုသည် Porchlight လက္ခဏာတွေဂျက်ရိဒ်
(Nashville, Tennessee ပြည်နယ်-ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2014) Porchlight, ထိုဆုရစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီဂျက်ရိဒ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ဂျက်ရိဒ်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ရိဒ်အရှေ့တောင်နှင့်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-action ကိုနှင့် tabletop ဒါရိုက်တာ၏ Nashville-based ကုမ္ပဏီ၏တန်းစီဇယားကိုကိုယ်စားပြုပါလိမ့်မယ် ဒစ်ဂျစ်တယ်နဲ့စီးပွားဖြစ်စျေးကွက်ထုတ်လွှင့်။ ဂျက်ရိဒ် com jackreedreps (dot) (မှာ) ပေါက်မှာရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်
အဆိုပါ 2014 NAB Show မှာသွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်ဟန်ပြကမ္ဘာ့ဖလား-Class ကိုဗီဒီယိုအရည်အသွေး Delivery
ကြောင်းကြည့်ရှုသည့်တသမတ်တည်းမြင့်မားတဲ့ HD ကိုရုပ်ပုံအရည်အသွေးကိုထိခိုက်စေဘဲက Ultra HD ကိုယနေ့ထုတ်လွှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအများဆုံးကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော, bandwidth ကို-အကျိုးရှိစွာထုံးစံ၌ သာ. အကြောင်းအရာနှင့် Multi-format နဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုကယ်နှုတ်စိန်ခေါ်နေကြဖို့ Multi-Screen ကို OTT မှစ. စက်မှု-ဦးဆောင်ဗီဒီယိုကို Compression ကို Solutions, တိုင်းပလက်ဖောင်းနှင့်စက်ပစ္စည်းတွင်မျှော်လင့်ထား။ အဆိုပါ 2014 NAB Show မှာ, သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်ကိုကြည့်ရှုသူများမြှင့်တင်ရန်အများအပြားတီထွင်မှုကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ် ...
Viaccess-Orcas တီဗီ Connect ကို 2014 ပြသခဲ့သည်ကို Preview
တီဗီ Connect ကို 2014 မှာ Viaccess-Orcas, အကြောင်းအရာန်ဆောင်မှုများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်တိုးမြှင့်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ထိရောက်သော Anti-ခိုးကူးလုံခြုံရေး, နေရာတိုင်းမှာတီဗီနှင့်အကြောင်းအရာရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဖြေရှင်းချက်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းအပါအဝင်လစာ-TV ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့အဓိကသော့ချက်စိန်ခေါ်မှုများ, ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ် ။ Viaccess-Orcas ရဲ့အဆုံးမှအဆုံးသို့, ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများနှင့်လုံခြုံရေးဖြေရှင်းနည်းများ, ထုတ်လွှင့်နဲ့ content ဝန်ဆောင်မှုပေးလုံလုံခြုံခြုံပေါ်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံအားကယ်မနှုတ်နိုင်နှင့်အတူလက်နက်ပါ ...
#NABShow မှာ iCR ၏နယူးဗားရှင်းမိတ်ဆက်ဖို့ AmberFin
Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံး QC ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးရန် UQC အသုံးပြုသူများကိုရောမွှေနိုင်ဖြစ်ကြပြီးပွဲစဉ် tools များ - အသံလွှင့် Interra စနစ်များ, Digimetrics နှင့် Tektronix -including တစ်ဆယ်ကွဲပြားခြားနားသောစျေးသည်များနှင့်စနစ်များကိုတစ်ဦး palette နှင့်အတူမဂ္ဂဇင်း, Daily သတင်းစာ EditionNow Beat ။ www.content-technology.com အပေါ်ကိုကြည့်ပါ
Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ် StreamScope MT-50 DTV ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း Tool ကိုဖွင့်ရန် ...
Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat, Daily သတင်းစာ EditionLAS Vegas-မှာယခုနှစ် NAB ပြရန်, Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်ယင်း၏ StreamScope MT-50 DTV သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း tool ကို၏ပဉ္စမမျိုးဆက်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ DTV သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီးစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်လေ့လာဆန်းစစ် ... www.c2meworld.com အပေါ်ကိုကြည့်ပါ
ယောဟနျသညျဒါဝိဒျ, ရေဒီယို၏ NAB EVP
Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat, Daily သတင်းစာ EditionThe NAB (လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံး) ကအဖွဲ့အစည်းရင်ဆိုင်နေရသောပြဿနာများကို၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံတို့အတွက်စည်းရုံးရေးအတွက်နီးကပ်စွာပါဝင်ပတ်သက်သည်အမေရိကန်တစ်လျှောက်လုံးနှစ်ဦးစလုံးရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အဓိကကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည် ... ကိုကြည့်ပါ ifsyndicate.blogspot.com အပေါ်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဟောလိဝုဒ် Entertainment ကစက်မှုဝန်ကြီးတစ်ဦးက New Flexible အာကာသဖြေရှင်းချက်ရှိထားသည် ...
Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat, Daily သတင်းစာ EditionFinally ဟောလိဝုဒ် Entertainment ကစက်မှုဝန်ကြီးတစ်ဦးက New Flexible အာကာသဖြေရှင်းချက်ရှိထားသည် ... www.postproductionbuyersguide.com အပေါ်ကိုကြည့်ပါ
Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat, Daily သတင်းစာ EditionNuContext နယူးယောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့: ငါတို့သည်လည်းလျှင်မြန်စွာနယူးယောက်ရုံးနှင့်ဝန်ထမ်းများကြီးထွားလာပါလိမ့်မည်, ငါတို့ www.postproductionbuyersguide.com အပေါ်အရှေ့ coast.See အပေါ်ဤနေရာတွင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် postproduction စွမ်းရည်ရှိသည်ဒါ
Litepanels နယူး Sola4ကို Traveller Kit ကမ်းလှမ်း
Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat, Daily သတင်းစာ EditionLitepanels နယူး Sola4ကို Traveller Kit တီဗီနည်းပညာ (CHATSWORTH, ကာလီဖိုးနီးယား။ ) Litepanels (r), အထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် LED မီးအလင်းရောင်တစ်ခု Vitec Group မှအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ဝန်ကြီးချုပ်ပံ့ပိုးပေးကမ်းလှမ်း, ကြေညာလိုက်ပါတယ် ယင်း၏သစ်ကို Sola4ကို Traveller များလွှတ်ပေးရန် ... www.tvtechnology.com အပေါ်ကိုကြည့်ပါ
Litepanels မိတ်ဆက် Sola4ကို Traveller Kit - စတူဒီယို Daily သတင်းစာ
Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat, Daily သတင်းစာ EditionLitepanels မိတ်ဆက် Sola4ကို Traveller Kit Studio က Daily သတင်းစာ Litepanels ကုမ္ပဏီ၏လက်ရှိအသေးဆုံးကပြောပါတယ်သူ့ရဲ့လူကြိုက်များမိုဃ်းလင်း-မျှမျှတတ Sola4၏အသုံးပြုသူများအတွက်အသစ်တစ်ခုကိုခရီးသွား option ကိုတစ်ဦး DMX-Control နဲ့ LED Fresnel ကြေညာလိုက်ပါတယ် www.studiodaily.com အပေါ် market.See အပေါ်ကြင်နာ၏
Streambox အားဖြင့် Avenir Mini ကို2နှင့်အတူ Streaming
အဆိုပါ Avenir Mini ကို2Streambox နေဖြင့်တစ်ဦးကို Ultra မိုဘိုင်း streaming များပစ္စည်းအန်ကုဒ်ဖြစ်ပြီး, သူကအနည်းငယ်နာမတော်က်ဘ်နှင့်မိုဘိုင်း Device များ, အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဂြိုဟ်တုကဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့အားဤသို့သောတိုက်ရိုက် Newsgathering, လွှအဖြစ်အများအပြားစျေးကွက်ပစ်မှတ်ထားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Avenir Mini ကို2ရဲ့သော့ချက် features တွေ / 4x embedded ကို USB modem 3x embedded 4G / 1G / LTE ကို modems / အထိပါဝင်သည် ...
TouchEdit နှင့်အံ့ဩခြင်း Studios ကအံ့ဩခြင်း & TouchEdit စတင်နေသည်
Future Action Editor Competition on February 25, 2014 (Los Angeles, California–February 27, 2014) In this competition TouchEdit gives you the huge opportunity to edit real footage fromaHollywood blockbuster movie. Exclusive to TouchEdit and first of its kind competition, Marvel Studios is providing students with the unique chance to editanever before shown action scene from the studio’s ...
3 ၏စာမျက်နှာ 27«12345	»	1020...နောက်ဆုံး»